Ny lalao mampihomehy Implosion, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ny lalao mampihomehy Implosion, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Tsy ny lalao ho an'ny ankizy kely ihany no miaina ny mpampiasa mahazatra ny iPhone sy ny iPad, na dia tsy maintsy ekena aza fa mora ampiasaina ho antsika rehetra izay manan-janaka kely. Androany, tsy toy ny tamin'ny andro lasa, miresaka lalao antsoina hoe Implosion isika, lalao misy sary mahatalanjona izay manana isa salan'isa 4,5 kintana amin'ny 5 ary misy ihany koa ny vidiny mahazatra 9,9 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny alàlan'ny rohy izay ho hitanao amin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
Ny implosion dia manome antsika sary izay mety ho hitantsika amin'ny console video an'ny lalao farany, ary ny feo dia manana anjara toerana lehibe amin'ny lalao, tsy amin'ny fampandrosoana ihany, fa noho i John Kurlander no namorona azy, Mpandresy Gramm sy injenieran'ny feo ho an'ny telo tonta "Lord of the Rings".
Roapolo taona taorian'ny fianjeran'ny tany, ny olombelona vitsivitsy izay tafavoaka velona dia miatrika fandringanana tanteraka indray amin'ny endrika fiainana miafina antsoina hoe XADA. Mba hiadiana amin'ny ady dia mila mampiasa ny akanjo miady Warmech andiany III isika, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana goavambe avo lenta izany dia ho azontsika atao mba ho lasa fusion farany eo amin'ny olona sy ny milina mba hiantohana ny fahaveloman'ny karazan'olombelona.
Implosion dia mitaky iOS 6.0 na taty aoriana. Mifanaraka amin'ny iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Wi-Fi (taranaka faha-2), iPad Wi- Fi + Cellular (taranaka faha-2), iPad Wi-Fi (taranaka faha-2), iPad Wi-Fi + Cellular (taranaka faha-2), iPad mini Wi-Fi, iPad mini Wi-Fi + Cellular, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 4, iPad Air 4 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 12,9, iPad mini 12,9 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 9,7, iPad mini 9,7 Wi -Fi + Cellular, 5 ″ iPad Pro, 6 ″ iPad Pro Wi-Fi + Cellular, XNUMX ″ iPad Pro, XNUMX ″ iPad Pro Wi-Fi + Cellular, iPod touch (taranaka faha-XNUMX) ary iPod touch (taranaka faha-XNUMX).
Mampalahelo ity lalao ity tsy mifanaraka amin'ny Apple TV. Ny implosion dia mitaky 2,6 GB farafahakeliny maimaimpoana amin'ny fitaovantsika hampidinana ny lalao, izay amin'ny teny anglisy ihany. Nomena isa ho an'ny moare 12 taona izy noho ny herisetra tafiditra amin'ny lalao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny lalao mampihomehy Implosion, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Super Mario Run Mpamorona Miyamoto miresaka momba ny fiaraha-miasa amin'ny Apple